‘एनिमल’मा रणवीर र रश्मिकाको केमेस्ट्री — Sanchar Kendra
‘एनिमल’मा रणवीर र रश्मिकाको केमेस्ट्री
मुम्बई । फिल्म ‘एनिमल’मा अभिनेत्रीको रुपमा रश्मिका मन्दानी भित्रिएकी छन् । रणवीर कपुरको मुख्य भूमिका रहने यो फिल्मबाट परिणीति चोपडा बाहिरिएपछि उनी भित्रिएकी हुन् । सन्दीप रेड्डी वाङ्गा निर्देशक रहेको फिल्म ‘एनिमल’ लगातार चर्चाको विषय बनेको छ । सुरुको समय फिल्ममा रणवीर परिणीति एकसाथ देखिने कुरोले चर्चा थियो । अहिले परिणीतिले फिल्म छाडेपछि रश्मिका मुख्य भूमिकामा देखिन लागेको कारण चर्चामा छ ।
रणवीर र रश्मिकाले पहिलो पटक यसै फिल्म मार्फत एकसाथ स्क्रिन शेयर गर्न लागेका हुन् । फिल्ममा रश्मिका र रणवीरको केमेस्ट्री उत्कृष्ट हुने निर्माण युनिटको विश्वास छ ।
फिल्मको छायांकन यसै बर्षको जुनबाट हुने बताइएको छ ।
फिल्म निर्देशक सन्दीपले यस अगाडि ‘कबीर सिंह’, ‘अर्जुन रेड्डी’ जस्ता हिट फिल्म दिएका छन् । रणवीर ‘एनिमल’को अलवा छिट्टै अभिनेत्री आलिया भट्टसँग ‘ब्रह्मास्त्र’मा समेत देखिँदैछन् । रश्मिकासँग भने अहिले थुप्रै फिल्म रहेको बताइन्छ । उनी पछिल्लो समय ‘पुष्पा’कान कारण चर्चामा छाएकी थिइन् ।
यस्तै बलिउड अभिनेता सलमान खान हालै अनन्या पांडेसँग आइफाको पत्रकार सम्मेलनमा देखिए । यतिबेला सलमानले अनन्यासँगै ठट्टा गरेका छन् । उनले अनन्यालाई ठ्याक्कै बाउजस्तै भएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । कार्यक्रमका उद्घोषक मनिष पलले सलमानसँग अनन्यालाई एउटा टिप दिने भने । यसमा सलमानले अनन्यालाई कार्यक्रममा कारका मालिकसँग निःशुल्क कारका लागि डिल गर भनेर सिकाए । त्यसपछि अनन्याले साँच्चै नै उनीसँग फ्रिको कार मागिन्।
अनन्याले मागिन् नेक्साका मालिकसँग निःशुल्क कारः
अनन्याले नेक्साका मालिकसँग भनिन्, ‘नेक्सा, मैले फ्रिमा गाडी पाउँछु ?’ त्यसपछि सलमानले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘चंकी पांडेकी छोरी हुन् । बाउ पट्टी गएकी छिन् ।’
सलमान, रितेश देशमुखसँग आउँदो आइफा आवर्ड होस्ट गर्नेछन् । कार्यक्रममा जब सलमानलाई ओस्कारमा विल स्मिथद्वारा क्रिस रकलाई थप्पड हानेको सन्दर्भ ‘कार्यक्रम उद्घोषक चुट्किलासँग सावधान हुनुपर्छ ?’ भनेर सोधियो । यसको जवाफमा अभिनेताले भने, ‘एक उद्घोषकको रुपमा तपाईं सेन्सेटिभ हुनुपर्छ । ह्यूमर बेल्टभन्दा माथि हुनुपर्छ, तल होइन ।’
बिहे गरेको हप्तादिनमै श्रीमानलाई छोडेर अमेरिका किन उडिन नायिका केकी अधिकारी ? यस्तो छ रहस्य
रणवीर कपूर र आलिया भट्टको विवाहकाे आधिकारिक मिति बाहिरियो
चर्चित बलिउड साधना सरगमले गाइन् नेपाली गीत
राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता सुरु, ६१ टोलीबीच दोहोरी भिडन्त
‘हेल्लो जिन्दगी’ को प्रचारमा सन्दीप र रविन्द्र
बस ड्राइभरका छोरा यश यसरी बने सुपरस्टार, एउटा फिल्मको लिन्छन् यति धेरै करोड
मिना कुमारीको मृत्युमा नरगिसले किन भनेकी थिइन् ? ‘तिमीलाई मृत्युको शुभकामना’
अन्तत: नायिका रेखा थापाले गरिन दोस्रो विवाह, को हुन् दुलाहा ?